Beesha Caalamka oo war ka soo saartay Shirka dhuusamareeb | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Beesha Caalamka oo war ka soo saartay Shirka dhuusamareeb
War saxaafadeed wadajir ah oo caawa kasoo baxay Saaxiibada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay shirka wadatashiga ah uu iclaamiyay shalay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Beesha Caalamka qoraalkan caawa kasoo baxay ayaa lagu sheegay in ay bogaadinayaan soona dhaweenayaan shirkan lagu qabanayo magaalada Dhuusomareeb ee looga arinsanayo khilaafka ka taagan doorashada dalka.
”Saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan ku-dhawaaqista 30kii Janaayo uu Madaxweynaha Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ku dhawaaqay in uu shir wadatashi ah la yeelan doono madaxda Dowlad Goboleedyada, shirkaas oo lagu qaban doono Dhusamareeb inta u dhexeysa 1da ilaa 3da Febraayo. Waxaan bogaadinaynaa hogaamintiisa ku aaddan qabashada shirkaan.” ayaa lagu yiri qoraalka Beesha Caalamka.
Saaxiibada Beesha Caalamka ayaa ugu baaqay Madaxda Dowlada federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee isugu imaanaya shirka wadatashiga in ay sameeyaan isu tanaasul kana fekeraan danta Qaranka.
”Waxaan ugu baaqeynaa ka-qeybgalayaasha inay si firfircoon oo daacadnimo ku dheehantahay uga qaybqaataan madashaas, si xal loo helo iyadoo loo marayo isu tanaasul cadaalad ku dhisan oo loo sameeyo danta qaranka, laguna heshiiyo hirgelimta hanaankii 17kii Sebtembar ee dardargelinta qabashada doorashooyin ka dhaca Soomaaliya oo dhan” ayaa lagu yiri qoraalka Beesha Caalamka kasoo baxay.
Beesha Caalamka ayaa cadaadis xoogan ku saartay Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxda maamul goboleedyada in ay isugu yimaadaan shir wadatashi ah si xal looga gaaro ismari waaga ka taagan doorashada Soomaaliya.
Previous articleWar deg deg ah Jen Galaal oo ka mid noqday masuuliyiintii Qaraxii Caawa ku dhintay
Next articleMaxaa u sabab ah Amni Xumada Magaalada Muqdisho
Xili shalay casirkii uu dagaal Culus uu ka dhex bilaawday hotelka Afrik kadib Qarax iyo Weerar ka dhacay halkaas, ayaa waxaa jiray in Ciidamada...